NextMapping | Mustaqbalka Macaamiisha Shaqada
Macaamiisheenu dhammaantood waxay leeyihiin hal shay oo ay wadaagaan: Rabitaan wadid si loo abuuro mustaqbal beddelaya ganacsiga, warshadaha iyo ugu dambayn adduunka.
In ka badan labaatan sano Cheryl Cran waxay la shaqeysay daraasiin warshado ah, boqolaal macaamiil ah iyo kumanaan dhagaystayaal ah oo daafaha dunida ku nool si ay si wanaagsan ugu diyaariyaan mustaqbalka shaqada.
Waxaan la shaqeeyay Cheryl dhowr jeer munaasabad kasta oo ay ku garaacdayna beerta. Waxay dhageysataa waxa aad u baahan tahay iyo waxaad isku dayeyso inaad ku guuleysato dhacdadaada, waxay la timid fariin wax ku ool ah oo leh muuqaallo xusuus mudan oo dhiirrigelinaya dhagaystayaasha. Qiimaynta bandhigyada Cheryl had iyo jeer waa calaamado aad u sarreeya. Iyadu waa dhab, firfircoon oo xirfad leh. Markasta ayay umushaa!
Shabakada CREW Network
Ma u baahan tahay caawimaaddeena?
Waanu kaa daboolnay - gaadho waxaan jeclaan lahayn inaan kula soo xiriiro.
Isku xir hadda